सम्बन्धमा तपाईंको जिब्रो नियन्त्रण गर्ने तरिकाहरू - PAMPEREDPEOPLENY.COM - सम्बन्ध
सम्बन्धमा तपाईंको जिब्रोलाई नियन्त्रण गर्ने तरिकाहरू
चलचित्रहरू COVID-19 को लागि सकारात्मक पठान टेस्ट का क्रु सदस्यहरुका बाद शाहरुख खान क्वारेन्टाइन
घर सम्बन्ध प्रेम बाहिर OI-Praveen द्वारा प्रेम प्रवीण कुमार | प्रकाशित: सोमबार, फेब्रुअरी १,, २०१ 2015, १:18:१:18 [IST]
के तपाईंलाई यस तथ्यलाई थाहा छ कि धेरै जसो सम्बन्धहरू नराम्रो बहस र चोट पुर्‍याउने शब्दहरूको कारण अलग हुन्छन्। तपाईं के गर्नुहुन्छ यदि तपाईं आफ्नो सम्बन्धलाई अन्तबाट बचत गर्न चाहनुहुन्छ? ठीक छ, तपाईं आफ्नो जिब्रो नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ र यो निश्चित गर्न सक्नुहुनेछ कि तपाईंले मौखिक झगडाको दौरान तपाईंको पार्टनरको भावनाहरूलाई चोट पुर्‍याउँनुहुन्न। यदि तपाईं आफ्नो जिब्रो नियन्त्रण गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंको साथीले तपाईंलाई बढी माया गर्नेछ। यदि तपाईंले आफ्नो जिब्रो स्लिप गर्नुभयो भने, तपाईं अह an्कारी, असभ्य र रसिलो व्यक्तिको रूपमा आउन सक्नुहुन्छ।
भ्यालेन्टाइन डे मा चुम्बनको लागि कसरी सोध्ने
घरमा कसरी कपाल सर्त गर्ने
के तपाइँको जीभ नियन्त्रण गर्न केहि तरिकाहरू छन्? हामी यसको बारेमा छलफल गरौं। यो गाह्रो छैन यदि तपाईं आफ्नो व्यवहारको बारेमा सचेत हुनुहुन्छ जब तपाईं सम्बन्धमा हुनुहुन्छ। शब्दहरू त्यहाँ संवाद र आफ्नो भावना व्यक्त गर्न को लागी हो तर एक अर्कालाई चोट पुर्याउनको लागि होईन। त्यहाँ सूक्ष्म तरिकाहरू छन् जुन तपाईं अर्को व्यक्तिलाई चोट नपुर्‍याई आफ्नो कुरा भन्न सक्नुहुन्छ। कसरी आफ्नो राज्यमा पुग्ने जहाँ तपाइँ आफ्नो बोलीको साथ अधिक सावधान हुनुहुन्छ? ठिक छ, यहाँ सुरू गर्न केहि तरिकाहरू छन्। मा पढ्नुहोस्
सोच्नुहोस् तपाईं कुरा गर्नु अघि
जाडो शुष्क छाला को लागी फेस प्याक
के तपाईंलाई थाहा छ तपाईंको जिब्रोलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने? तपाईंले आफ्नो पार्टनरसँग अप्रिय कुरा गर्न चाहनु अघि, यसबारे दुई पटक सोच्नुहोस्। मात्र यदि तपाइँसँग केही राम्रो भन्नु छ भने, बोल्नुहोस् अन्यथा कुरा गर्नुको सट्टा चुप लाग्नु उत्तम हुन्छ। अवश्य पनि, तपाइँले अप्रिय चीजहरू पनि कुराकानी गर्नुपर्दछ, तर ती कुराहरु व्यक्त गर्नुहोस् अप्रिय चीजहरू व्यक्त गर्ने सुखदायक तरीका फेला पारे पछि मात्र। यसले तपाईंको सम्बन्ध बचाउनेछ।
माफी माग्नु मा केहि गलत छैन जब तपाईले आफ्नो साथीलाई चोट पुर्‍याउने केहि कुरा भनेको छ। जब तपाईं विभाजित दोस्रोको लागि तपाईंको जिब्रोलाई नियन्त्रण गर्न असफल हुनुभयो, तपाईं जहिले पनि पछुतो भन्न सक्नुहुन्छ र केहिमा बढ्नुहोस्। यसले तपाईंको मुटुलाई असह्य बनाउँदछ र यसले तपाईंको पार्टनरलाई पनि खुसी राख्दछ।
व्यक्ति जसको नाम आर बाट शुरू हुन्छ
आफैंलाई सकारात्मक ठाउँमा राख्नु र आफैंलाई सकारात्मक मान्छेले घेर्नु उत्तम हुन्छ। यसले तपाईंलाई तपाईंको विचारहरू, शब्दहरू र कार्यहरू सकारात्मक राख्न मद्दत गर्दछ। जब तपाईंको जीवनमा सबै सकारात्मक हुन्छ, त्यहाँ नकारात्मकताको लागि कुनै ठाउँ हुँदैन। जब त्यहाँ नकारात्मकता छैन, तपाईंले आफ्नो जिब्रोलाई नियन्त्रण गर्न पनि आवश्यक पर्दैन।
फोहोर पदार्थबाट सजावटी वस्तुहरू बनाउँदै
भावनाबाट टाढा नहुनुहोस्
तपाईका भावनाहरू संकेत बाहेक केही होइनन्। तिनीहरू बाह्य उत्तेजनाको प्रतिक्रियाको रूपमा तपाईंको प्रणाली भित्र के भइरहेको छ भन्ने बारे सूचनाहरू हुन्। यसको मतलब यो होइन कि तपाईंले आवेगपूर्ण तरिकामा हरेक भावनाहरूमा प्रतिक्रिया देखाउनु पर्दछ। तपाईंले प्रतिक्रिया दिन अघि सोच्न रोज्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईंलाई अझ राम्रो बनाउन मद्दत गर्दछ।
एक हप्ता भित्र पेट कसरी कम गर्ने
भारतीय झण्डामा भगवा रंगको अर्थ
शिवलिंग पछि के कथा छ?
गर्भवती पहिलो त्रैमासिकको समयमा बसेको स्थिति
करीनामा कपूर तातो लक्मे फेसन वीकमा
yatley विज्ञापन मा कतरीना कैफ तातो